Maqal: Maamulka Degmada Garoowe oo Gubay Baco ay soo qabteen+Sawiro – SBC
Maqal: Maamulka Degmada Garoowe oo Gubay Baco ay soo qabteen+Sawiro
Posted by Webmaster on March 28, 2013 Comments
Waxaa manta meel fagaare ah dowlada hoose ee degmada Garoowe ku gubeen dhowr lowr oo baco ah kuwaasi ay ka soo ururiyeen xarumaha ganacsiga ee magaalada Garoowe ka dib markii dowlada Puntland ay mamnuucday in la adeegsado bacaha.
Gubitaanka bacaha waxa aka qeyb galay masuuliyiinta dowlada hoose ee Garoowe ,wasiirudowlaha wasaarada degaanka ,taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal iyo xubno kale.
Duqa degmada Garoowe C/casiis Nuur Cilmi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in aysan ogolaanayn manta laga bilaabo in Garoowe lagu isticmaalo bacaha oo horay dowladu u mamnuucaday.
Taliyaha qaybta booliska gobolka nugaal C/rixmaan Xaaji Abshir Faarax ayaa isaguna dhankiisa sheegay in ciidamada amaanku ku dadaalayaan la dagaalanka bacaha.
Wasiiru dowladaha wasaarada degaanka puntland Saleebaan Siciid Dhoodi ayaa tilmaamay in xanuuno laga qaado isticmaalka bacaha isla markaana aysan u wanaagsanayn deegaanka iyo caafimaadka dadka iyo xoolahaba.
Tan iyo markii Puntland ku dhawaaqaday in deeganadeeda ay mamnuucaday bacda waxaa garoowe noqonaysa meesha ugu horaysay laga bilaabo ururinta iyo gubista bacaha marka la eego gobolada kale ee Puntland.
Dhageyso Warbixin ku saabsan Warkan iyo Wariye Samiiro warka idaacada ee bacaha